Salonist Spa na Salon Management Platform: Oge akara aka, Ndepụta Ngwaahịa, Ahịa, Nkwụ ụgwọ, na ndị ọzọ | Martech Zone
Onye Salonist bụ sọftụwia ngwanrọ na-enyere spa na salons aka ijikwa ụgwọ ọnwa, ịgba ụgwọ, itinye ndị ahịa gị aka, ma mepụta usoro ịzụ ahịa. Atụmatụ gụnyere:
Oge akara aka maka Spas na lonlọ Mmanya
Ndenye akwụkwọ ntanetị - Iji smart Salonist Online ntinye akwụkwọ software, gị ahịa nwere ike ịtọọ oge, ibughari, ma ọ bụ kagbuo oru n'oge ọ bụla ha na-. Anyị nwere ma weebụsaịtị na ngwa ngwa enwere ike ijikọ ya na njikwa mmekọrịta Facebook na Instagram. Na nke a, usoro ntinye akwụkwọ zuru ezu na-akpaghị aka. Enweghị ntinye akwụkwọ abụọ. Ka e mesịrị ọ dịghị-egosi ndị Salonist.
Ndị na-egbochi oghere - Kwụsị igbu oge nke ndị ọrụ na ndị ahịa site na iwepụ oge anaghị adị na kalịnda gị. Na oghere blockers maka online ntinye akwụkwọ, i nwere ike na-egosi naanị dị ohere mpere, nke na-egbochi oke oru ntinye akwụkwọ n'ime a kpọmkwem oge etiti.
Oge ezumike akwụkwọ - Nye ndị ahịa gị ohere ka ịdee akwụkwọ, ọbụlagodi na oge azụmahịa, site na iji sọftụwia njikwa. Na sọftụwia kacha mma ị nwere, azụmahịa gị nwere ike ịga n'ihu na-agagharị ọbụlagodi mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị. Ezubere Salonist iji mee ka ndị ahịa gị na-agbanwe agbanwe, ebe ha na-ede akwụkwọ nke ọma n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Nchịkọta ngwugwu - Nwee nnwere onwe iji mepụta nchịkọta maka ọrụ dị iche iche na ụyọkọ adaba. Site na ngwanrọ njikwa ahịa a, ị nwere ike ịbawanye ire na ego gị na ụlọ ọrụ gị site na ịme ka ọ dị mfe maka ndị ahịa itinye ntinye akwụkwọ dabere na mmasị ha. Salonist salonlọ Mmanya Sọlọmọn dịkwa mma maka ịbawanye iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa gị na ngwugwu salonlọ Mmanya na-enweghị ntụpọ na mkpịsị aka ha.
Bookdebanye aha ndị òtù - Nye ndị ahịa gị ihe mkpali iji guzosie ike site na iji ntinye akwụkwọ na ịhazi usoro ndị otu. Na Salonist, ndị nwe ụlọ Salon nwere ike ịme mmemme iguzosi ike n'ihe nke na-enye ndị otu ego maka ọrụ ụfọdụ. A nwapụtala nke a iji mee ka mmụba salonlọ Mmanya na ịbawanye ọnụego ndị ahịa.
Nabata ịkwụ ụgwọ - Kedu otu ọ ga-esi dị mma ịnwe sọftụwia kacha mma nke na-eme ka ịnabata ịkwụ ụgwọ ikuku? Onye Salonist abịa na wijetị ntinye akwụkwọ na ntanetị jikọtara ya na Paypal, Stripe, na Authorize.Net. Ndị nwe Salon nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ọrụ gị site na ịmekọrịta ịzụrụ na wijetị na sọftụwia njikwa anyị. Nwekwara ike ịnabata ụdị ịkwụ ụgwọ ọ bụla site na iji ire ahịa anyị jikọtara ọnụ.
Ahịa maka Spas na lonlọ Mmanya
email Marketing - Zipu ekele ụbọchị ncheta, atụmatụ ndị otu na nkwenye nhọpụta n'ime ihe na -erughị nkeji ise site na iji ọrụ ahịa email Salonist. Ahịa email bụ ụzọ dị mma iji mụbaa nhọpụta maka ọrụ salon na spa gị. Salonist bụ maka ịkwalite ọnụego njigide ndị ahịa yana iwepụta nnukwu ego maka ụlọ ọrụ gị.
Nyocha Nyocha - Nyocha bụ ụzọ dị egwu iji gosi ụwa na ị na-eme ihe ziri ezi. Ọ na - enyere gị aka ịnwekwu ndị ahịa ma na - edebe ha. Usoro nhazi oge Salonist na-enyere gị aka inweta nzaghachi sitere na ndị ahịa gị na ngwaahịa na ọrụ gị. Site na ngwa ngwa ezitere site na SMS na email na smartphones ha maka njikwa ndị ahịa kwesịrị ekwesị, ịnwere ike ijikọ ndị ahịa gị.
Nchịkwa dere - Ọ bụrụ na otu ihe ndị ahịa hụrụ n'anya, ọ bụ ọrụ n'efu. Nye ndị ahịa gị ụgwọ maka nkwado ha na mbelata ego na onyinye na coupon na usoro mmeghari ohuru. Enweghị usoro mgbagwoju anya gụnyere. Nwere ike ijikwa ikike a site na Generate Salon na Spa Discount Coupons taabụ na sọftụwia salonlọ Mgbawa mara mma. Mee ka ndị ahịa gị webata ọtụtụ ego.
onyinye kaadị - Nye ndị ahịa gị ohere inye ndị ha hụrụ n’anya onyinye maka ọrụ gị n’oge pụrụ iche. Ma ọ bụ emume ncheta ọmụmụ ma ọ bụ ncheta ọmụmụ, otu kaadị onyinye ahaziri na Salonist nwere ike inyere gị aka isoro ndị ahịa nwee mmekọ. Ihe ikpo okwu na-agwa ha ozugbo site na email ma ọ bụ SMS.
Usoro iguzosi ike n'ihe - Mmemme iguzosi ike n'ihe site na njikwa ndị ahịa bụ usoro ụgwọ ọrụ ọzọ dị ukwuu maka ndị ahịa gị. Nke a ga - enyere aka imeziwanye oge nleta ha. Lelee ngwanrọ Salonist maka nnweta dị mfe na mmemme iguzosi ike n'ihe nke ga-eme ngwa ngwa kwalite ndị ahịa gị, ntinye aka, na nchekwa.
Mgbasa ozi SMS - Belata ohere ị ghara igosi ndị ahịa gị. Salonist nyere gị aka ịnọnyere ha site na ncheta ncheta, itinye aka na ndị ahịa, mkpọsa nkwado, na ọtụtụ ndị ọzọ. Zụlite azụmahịa gị site na ịbanye na mkparịta ụka gị na ndị ahịa gị na ịmara kpọmkwem ihe ha chọrọ.
Na mgbakwunye na ịhazi ọnọdụ na ịzụ ahịa, Onye Salonist gụnyekwara njikwa ndị ahịa, nhọpụta ndị emere tupu oge eruo, njikwa ngwongwo, njikwa mmefu, njikwa ọnọdụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, nchịkọta nyocha, ire ere, ngwa mkpanaka, ụdị ntanetị, na akụkọ zuru ezu. A na-etinye sọftụwia salon a n'ihe niile ịchọrọ iji bulite ego, chekwaa oge, meziwanye ọhụhụ, ma mee mkpebi dị mma na ụlọ ọrụ mara mma. Nyochaa atụmatụ nke ngwa ọrụ a kacha hụ n'anya ma dịrị njikere ịme azụmahịa gị ka mma.
Na-amalite na Salonist
Ndị ahịa ha gụnyere ụlọ ahịa ndị na-akpụ isi, ebe a na-eme ntutu isi, ndị na-agwọ ịhịa aka n'ahụ, ebe a na-etinye ntu, spa, ebe a na-alụ nwanyị ọhụrụ, sọftụwia spa maka ahụike, nlekọta anụ ahụ mara mma, ndị na-ese egbugbu, ndị na-agbazite ụlọ ntu, ebe a na-agba tanụ, na ndị na-edozi anụ ụlọ.
Bido Ọnwụnwa n'efu
Ngosi: Abụ m mmekọ Onye Salonist.
Tags: nlekọta anụ ahụ mara mmaAnalyticsnhazi ogeụlọ ahịa na-akpụ isiụlọ ndozi ụlọ ndoziedozi edozinjikwa ndị ahịanjikwa mmefuntutu ntutuatọ ndị yiri nkata managementnjikwa ọnọdụịhịa aka n'ahụ na-agwọ ọrịaọgwụ spa spangwa mkpanaakasalonsụdị dị n'ịntanetịonline ụlọ ahịandị na-azụ anụ ụlọebe ire erenaaemechiri emechiahịa salonlọ Mmanyaspassalonsndị na-ahụ maka ịsa egbugbu